Jarmalka: lo’da oo loo tababarayo qaabka suuliga loo isticmaalo - Bulsho News
Ruushka iyo Faransiiska ma dhexmari karaa dagaal dadban oo ka...
RSV: Fayraska aan wax badan laga aqoon ee carruurta ku...
Muuse Biixi “OCHA waxay ka hadashay wax aan...
Qaraxa Zoobe 4 sano Kadib: Dhimasho 600, Dhaawac...
Guriceel: Shacabka oo Barakacay iyo Shuban Biyood Dilaacay
Guriceel:- Ayaanle kadib, Habar-eji Oo Suufiyada Ahlusunna Ka...
Uganda oo Ciidamo usoo Direysa Soomaaliya
Soomaali Loo Xiray Dilka Xildhibaan Ka Tirsan Baarlamaanka...
QM Oo Sheegtay In Ay Sare U Kaceen...
Dad Soomaali Ku Jiraan Oo Lagu Dhaawacay Weerar...
Munaasinad Lagu Xusayay 20 Guuradda Aasaaska UCID Oo...
Sacuudiga Oo Si Buuxda U Furay Masjika Barakeysan...
“Waa ku ceeb OCHA in ay lacag ku...
Daawo: Barnaamij Ku Saabsan Xasuuq 1988-kii Ka Dhacay...
Muqdisho: Dab Sababay Khasaaro Oo Ka Kacay Kaalin...
Warbixin: Dhacdo Dhex Martay Wasiir iyo Arday Dugsi...
Jarmalka: lo'da oo loo tababarayo qaabka suuliga loo isticmaalo
Jarmalka: lo’da oo loo tababarayo qaabka suuliga loo isticmaalo
Lo’du waxay noqon kartaa kuwa loo tababbaro musqusha si loo yareeyo qiiqa gaaska ee sii kordhaya, ayay cilmi -baarayaashu sheegeen.
Daraasaddan tijaabo ah ayaa laga sameeyay dalka Jarmalka. Saynisyahannada waxay sheegeen in ay u tababbareen xayawaanka in ay isticmaalaan musqul loogu talagalay. Kaadidooda ayaa la ururiyay lana daweeyay.
Maaddada Ammonia ee ku jirta kaadida lo’da, waxay isu rogtaa gaaska loo garanayo nitrous oxide marka ciidda lagu qaso, sida ay khubarada sheegeen.
Guud ahaan dunida oo dhan, qiyaastii 10% gaaska saameeya isbadalka cimilada ee ka yimaada ficillada dadka, waxa uu ka soo baxaa lo’da.
Cilmi-baadhayaasha waxay isku dayeen in ay 16 neef oo lo’ ah baraan sida loo isticmaalo musqusha, waxaana mashruucaan loogu magac daray “MooLoo”, oo ah beer uu leeyahay Machadka Cilmi-baarista ee Bayoolojiga Xoolaha iyo Beeraha.
Lo’da ayaa la geliyay xarunta MooLoo waxaana la siiyay cunto kaadida u badineysa. Intaas ka dib, ayaa la geeyay meel ku xigta xarunta MooLoo ka dibna waa la socodsiiyay si ay u kaadiyaan.
lo’dii ku kaadisay banaanka MooLoo waxaa muddo saddex ilbiriqsi lagu buufiyay biyo. Iyada oo qayb ka ah heerka saddexaad ee tababarka, waxaana la kordhiyay masaafada musqulaha ay isu jiraan.
Gabagabadii 10-kii tijaabo ee tababarka, cilmi baarayaasha waxay ogaadeen in 11 ka mid ah xayawaanka si fiican ay qaateen tababarka musqusha.
“15 ilaa 20 jeer, kaadida celcelis ahaan, lo’da waxay iskood u bilaabi lahaayeen in ay galaan musqusha,” Lindsay Matthews, oo ah cilmi-baare ku lug leh daraasadda, ayaa sidaa u sheegay Radio New Zealand.
“Dhamaadkii, saddex meelood meel ka mid ah lo’dii la tababaray, waxay ku kaadiyeen musqulihii loo diyaariyay,” ayuu yidhi.
Lo’da ayaa la geliyay xarunta MooLoo waxaana la siiyay cunto kaadida u badineysa
“Weylaha waxay muujiyeen heer la qabsi oo u dhigma kan ilmaha, kana sarreeya kan carruurta aadka u yar,” ayaa lagu yiri daraasadda.
Baarayaasha ayaa sheegaya in 80% lo’da ay la qabsato qaabka MooLoo ay horseedi karto in 56% ay yaraato qiiqa ammonia.
Waxa kale oo ay sheegeen in hoos u dhigidda kaadida aagga xoolaha nool ay kor u qaadi doonto nadaafaddooda iyo daryeelkooda.
by Bulsho Media 6 hours ago 6 hours ago
Qaraxa Zoobe 4 sano Kadib: Dhimasho 600, Dhaawac 700 iyo Hanti Burbbur $6 Mliyan
Guriceel:- Ayaanle kadib, Habar-eji Oo Suufiyada Ahlusunna Ka Dalbatay Inay Dhufaysyada Qaadaan
Afghan girls stuck at home, waiting for Taliban...
‘Western bloc’ has let Pakistan down, board chief...
Isticmaalka Telefoonka: Maxaad u “argagaxdaa” marka mobile-ka lagaa...
Wayne Couzens’ lies raise fears over how to...
US, Taliban to hold first talks since Afghanistan...
Axmed Fiqi: Qoor-Qoor wuxuu go’aansaday dagaal burbur ku...
Chelsea Oo Wadada Guusha Ku Soo Laabatay ,...
Man United Oo War Fiican Ka Heshay Xaalada...
Rebels without a cause: has title win taken...
Neymar Oo Magacaabay 5 Xiddig Oo Isaga Ka...
Xisbiga Xasan Sheekh oo si cajiib ah uga...
Farmaajo Oo Hakiyey Awoodihii Rooble
Laascaanood: Tababar Loo Qabtay Shaqaalaha Xarumaha Caafimaadka Dawliga...
Wicitaanka Dhageystaha: Tallaalka cusub ee cudurka Duumada
Germany’s kingmaker parties propose coalition talks with SPD...
Sick of weeds and trash piles, Rome to...